Bantu Rovers goalie moves to Highlanders | ZimsInSA
BULAWAYO – HIGHLANDERS Football Club have secured the services of Bantu Rovers goalkeeper Takunda Mutanga on a permanent transfer.
Mutanga replaces Liberty Chirava, wow as dropped after falling foul of the clubâ€™s rules and regulations after he refused to wear the clubâ€™s regalia during a pre-season trip to Victoria Falls and refusing to eat with his new teammates.
Tshintsha Guluva’s general manager Wilbert Sibanda confirmed Mutanga’s move saying it was a swop deal with Highlanders junior midfielder Chidzani Malaba, who has permanently moved to Bantu Rovers. – New Zimbabwe
Sick Zambian president heads to SA for treatment
Originally posted 2014-09-03 09:04:40. SA BASED Zimbabwean national soccer